Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka Motorola, car, Plus / Mini
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka Motorola, car,
Weligaa ma ku jirtay xaalad hoose oo loo baahan yahay inuu ka soo kabsado tirtiray sawirro, muuqaallo iyo music ka Motorola, car, Plus ama Motorola, car, Mini?
Masaxay sawirada, cajaladaha iyo heeso ka phone Motorola ugu cadhoodaa mid sabab u ah si xun u isticmaalka.
Dhaco formatted kaadhka xusuusta ku qalabaysan phone Motorola ah.
Dib u celi telefoonka aan backupping kuwa photos qaali ah.
Ul xasuusta waxaa burburtay ama kharribeen sabab u habboonayn fur-baxay.
Telefoonka waa jabay ama biyo burburay, waxaa ku jira si ay u soo ceshano gudaha photos?
Haddii aad aqrinayo mid ka mid ah dhibaatooyinka kor ku xusan iyo sawiro laga badiyay, videos ama music ka telefoonada Motorola, car, joojin lagu hadda ka walwalsan tahay. Waxaad fursad fiican si aad u hesho dib oo dhan, in alla inta aad isma badbaadin files cusub in kaadhka xusuusta ka dib shilka.
Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka Motorola, car, Plus / Mini
First of dhan, aad u hesho a Motorola, car, soo kabashada sawir qalab: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac .
No arrin aad files warbaahinta waa la tirtiray, formatted ama lumay ay sabab u tahay sababo kale sida MIS-shaqayn, awood failure, shil kaadhka xusuusta, iwm, labada Softwares ah laguu suurogeliyo in aad iyaga dhan kabsan 3 tallaabo khasaara eber oo tayo leh. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad kala soo baxdo oo marka hore loo soo dajiyo on your computer iyo raac edbinta aado.
Isku day version maxkamad free of this Motorola, car, software kabashada sawirka hadda. Dooro version saxda ah ee computer.
Step1. Connect aad telefoon si computer iyo abuurtaan barnaamijka
Si aan ku bilaabo, xiriiriyaan Motorola, car, Plus / Mini in kombiyuutarka la cable ah digital ah ama si toos ah u xirmaan kaadhka xusuusta la akhristaha kaarka. Markaas Airline barnaamijka aad rakibi on your computer, oo guji "Start" badhanka si ay u bilaabaan soo kabashada sawir Motorola car.
Step2. Dooro in iskaan dhammaan faylasha tirtiray aad Motorola, car, Mini / Plus.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawirada tirtiray ka Motorola, car, Mini / Plus.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad Motorola, car, Mini / Plus ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.